Depụta ụdị ọhụrụ nke Zulip Server 2.1, ihe ọzọ na Slack | Site na Linux
A tọhapụrụ mbipụta ihe nkesa Zulip 2.1 ọhụrụ, nke bụ ikpo okwu nke na-arụ ọrụ dị ka isi iji zipu ndị ozi ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị iji hazie nkwukọrịta n'etiti ndị ọrụ na ndị otu mmepe.
Usoro na-akwado ozi dị n'etiti mmadụ abụọ na mkparịta ụka otu. Zulip enwere ike iji ya tụnyere ọrụ Slack ma were ya dị ka onye ọrụ ụlọ ọrụ dị n'ime nke Twitter, ejiri maka nkwukọrịta na mkparịta ụka banyere nsogbu ọrụ na nnukwu otu ndị ọrụ.
Enyere ego iji soro ọnọdụ ma sonye na mkparịta ụka dị iche iche n'otu oge n'iji usoro ngosi ozi yiri eri, nke bụ nkwekọrịta kachasị mma n'etiti ijikọ ọnụ ụlọ na Slack na otu ohere ọha na Twitter. Ngosipụta nke nkwurịta okwu niile na-enye gị ohere ikpuchi otu niile n'otu ebe, ma na-enwe nkewa ezi uche dị n'etiti ha.
Zulip malitere oru ngo a ma mepee ya mgbe Dropbox nwetachara ya n'okpuru ikike Apache 2.0. Edere koodu nkesa na Python iji usoro Django. Ngwanrọ ndị ahịa dị maka Linux, Windows, macOS, Android, na iOS a wuru interface ụlọ weebụ.
1 Kedu ihe dị ọhụrụ na Zulip Server 2.1?
2 Esi nweta Zulip Server 2.1?
Kedu ihe dị ọhụrụ na Zulip Server 2.1?
Gbakwunyere a ngwá ọrụ iji bubata data sitere na ọrụ dabere na Mattermost, Slack, HipChat, Stride na Gitter. Mgbe ị na-ebubata site na Slack, a na-enye nkwado maka atụmatụ niile enyere mgbe ị na-ebupụ data site na ndị ahịa ọnụego ụlọ ọrụ.
Iji hazie ọchụchọ ederede zuru okeugbu aI nwere ike ime ya na-enweghị wụnye mgbakwunye ọkachamara maka PostgreSQL, nke na - enye gị ohere iji nyiwe DBaaS dịka Amazon RDS kama iji DBMS mpaghara.
Beennweta ngwaọrụ iji bupụ data agbakwunyere na njikwa web njikwa (nke ebupụtara naanị site na iwu iwu).
Na mgbakwunye, ọ pụtara na ụdị ọhụrụ nke Zulip Server 2.1 nal Nkwado maka Debian 10 "Buster", Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ A kwụsịrị nkwado maka Ubuntu 14.04 na nkwado maka CentOS / RHEL agwụbeghị ma ọ ga-apụta na nhapụ n'ọdịnihu.
Anyị nwekwara ike ịchọpụta na e megharịrịrị usoro ozi email ahụ kpamkpam, nke belatala n'ụdị ụdị pere mpe, dị ka usoro ngosi GitHub.
Agbakwunyere ntọala ngosi ọhụrụ que kwere ka ijikwa omume nke ntanye ọkwa na ozi email maka skins (dịka ọmụmaatụ, @ niile), yana ịgbanwe usoro maka ịgụta ozi a na-agụghị.
Mmejuputa iwu-nke emegharịrị ọnụ ụzọ ámá iji nyochaa email na-abata. Agbakwunyere nkwado maka ịsụgharị ozi Zulip na-aga na ndepụta nzipu ozi, na mgbakwunye na ngwaọrụ ndị enwere na mbụ maka ijikọ na ọrụ Zulip maka izipu akwụkwọ ozi.
Agbakwunyere nkwado nwa amaala nke SAML (asụsụ nkwupụta akara ngosi)
Koodu edegharịrị maka ijikọ na usoro nyocha nke Google: A na-emegharịrị nkwado niile nke OAuth / mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na iji usoro Python-social-auth.
Na njirimara onye ọrụ, enyere ndị ọrụ nyocha "iyi: ọhaneze", nke na-enye ike ịchọ nyocha niile mepere emepe nke akwụkwọ ozi nzukọ.
Syntax gbakwunyere akara Markdown iji jikọọ isiokwu isiokwu.
Agbatịwo usoro nhazi ọnọdụ iji chịkwaa ikike nke ndị ọrụ iji mepụta ma kpọọ ọwa ha.
Oge nyocha beta emeela nkwado maka ịhụchalụ ibe weebụ ndị a kpọtụrụ aha na posts.
Emechara ngosipụta ahụ, ntinye aha na ndepụta, amaokwu na blọgụ nwere koodu ka emezigharịrị.
Agbakwunyere modul ọhụrụ na BitBucket Server, Buildbot, Gitea, Harbor na Redmine. Hazi usoro dị oke mma na modulu mwekota ndị dị ugbu a.
Esi nweta Zulip Server 2.1?
Maka ndị nwere mmasị na ụdị a maka sava, nwere ike ịchọta akwụkwọ ndị dị mkpa maka mmejuputa ya, nke zuru oke nke oma Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Depụta ụdị ọhụrụ nke Zulip Server 2.1, ihe ọzọ na Slack
N'ihi njedebe nke nkwado maka Windows 7, ndị mmepe Vivaldi na-akpọ gị òkù ịkwaga na Linux